Farmaajo oo maanta booqasho ku tagey Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa duhurnimadii maanta booqasho lama fillaan ahayd ku tagey Xarunta Madaxtooyada Somaliya (Villa Somalia).
Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa uu Villa Somalia uu kula kulmay Madaxweynihii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo labada masuul ay xaaladda iska wareysteen.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa ku ammaanay Madaxweynihii hore waxqabadkiisii afartii sano ee la soo dhaafay, ee uu kaga hawlgelayay Qasriga Villa Somalia.
Madaxweynaha, ayaa sidoo kale waxaa uu Madaxtooyada ku dhex booqday askar ku waxyeeloobay weerarada Shabaabku ka wadaan Magaalada Muqdisho. Askartan oo qaarkood ku naafoobay qaraxyada Shabaabka, ayaa xoghayntiisa ku amray in magacyada askartaasi ay u soo qoraan.
Madaxweynaha, ayaa waxaa la soo sheegaya in Villa Somalia uu gaaray isagoo lugeynaya, waxaana tallaabadan lagu macneeyay mid uu ku doonayo in uu ku dhex-galo bulshada Somaliyeed.
Intii uu kormeerkiisan uu ku guda jiray Madaxweyne Farmaajo, ayaa waxaa ammaankiisa suggaayay Ciidamada Kumaandooska Somaliyeed ee Danab, mana jirin askar ka tirsan Amisom oo la socotay.
Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), Madaxweynaha la doortay ee Somaliya, ayaa waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in uu si rasmi ah uu ula wareego Xafiiska Madaxtooyada.